मिन्स भएको कति दिनदेखि सम्पर्क राख्ने र मिन्स भएको कति दिन पछि बच्चा बस्छ ?
२०७६ श्रावण २३ बिहीबार
काठमाडौ, पाठेघरमा बच्चा बस्न वा गर्भरहन थुप्रै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डिम्बको मिलनबाट हुन्छ।
यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब – (अण्डा) सँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ।
यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ। यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु वा बच्चा बन्छ। सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुनका लागि मुख्य रूपमा निम्न कुराहरू हुनुपर्छ :
२. यौन सम्पर्क,
एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के भने डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४ औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले यस समयमा सम्भोग गर्दा गर्भ रहने अर्थात् बच्चा बस्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
डिम्ब निस्किएको २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भनेमहिलाको प्रजनन अङ्गभित्र शुक्रकीटहरू ७२ घण्टा वायोभन्दा केही बढी नै बाच्न सक्छन् । त्यसैले डिम्ब निस्कनु केही अघिको र केही दिनपछिकोसमयलाई गर्भधारणको दृष्टिकोणले असुरक्षितकाल मानिन्छ ।
२०७६ श्रावण १७ शुक्रबार
काठमाण्डौं, सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र...
धेरै यौन आनन्द कुन उमेरमा लिइयो ? तथ्य यस्तो भन्छ
काठमाडौं, अहिलेसम्म मानिँदै आएको थियो कि पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बढी उमेरमा...
२०७६ श्रावण १९ आइतबार
एजेन्सी, मानिसको इक्षा अनुसार सोख अनुसार फरक किसिमको यौन सम्पर्क...
एजेन्सी । महिला र पुरुषबीचको यौनसम्बन्धमा दुबैको सन्तुष्टिका लागि आदर्श...